အမျိုးသမီးကြွက်၌လိင်အပြုအမူစဉ် Nucleus Accumbens နှင့် Striatum ရှိ Dopamine ၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ဆန်သော ဦး နှောက်
အဆိုပါအမျိုးသမီး Rat (2001) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ Accumbens နှင့် Striatum အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပ
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 1 မေလ 2001, 21(9): 3236-3241;
ကို Jill ခ Becker က1,2,
ချားလ်စ် N. Rudick1နှင့်
+ စာရေးသူ Affiliate
1 စိတ်ပညာဌာန, နှင့်
2 မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံအစီအစဉ်နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံအစီအစဉ်, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, မစ်ရှီဂန် 48109
နျူကလီးယပ် accumbens ထံမှ dialysate အတွက် Dopamine (NACC) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူစဉ်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုက်ရိုက် dopaminergic စနစ်များ (ဥပမာ, မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်း) ကိုသက်ဝင်မပင်သူတို့၏အမျိုးအအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များနှင့်အခြားသူများကို dopamine ကြိုးဖြစ်ပါသည်, အားဖြည့်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience attributes ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းကြောင်းယူဆချက်မှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း NACC သို့မဟုတ် striatum အတွက် dopamine အတွက်တိုးဆန်းစစ်ပါကဤဆက်ဆံရေးလေ့လာဖို့တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွအေနေပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးကြွက်အဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု NACC dopamine အတွက်တိုးသာအချို့သောစမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေများအောက်တွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်, ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုဟာ NACC ထံမှ dialysate အတွက် dopamine အတွက်တိုးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း striatum များအတွက်အရေးကြီးသောတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအဆိုပါအချက်များယောက်ျားဖြင့်အဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်သည်အထီးဖြင့်အဆက်အသွယ်များ၏အချိန်ကိုက်သို့မဟုတ်အထီးဖြင့်အဆက်အသွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းရည်ကိုရကြ၏။ ရလဒ်တိုးလာ NACC dopamine အမျိုးသမီးကြွက်တက်ကြွစွာဒီအချိန်ကိုက်ထိန်းညှိရာတွင်ပါဝင်နေသည်ရှိမရှိ၏လွတ်လပ်သော, copulatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိန်ကိုက်အပေါ်မှီခိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ striatum အဘို့, copulatory အပြုအမူ၏အချိန်ကိုက် dialysate အတွက် dopamine အတွက်တိုး၏ပြင်းအားသြဇာလွှမ်းမိုး, ဒါပေမဲ့တခြားအချက်တွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တိုးလာ extracellular အဆိုပါ NACC အတွက် dopamine နဲ့ striatum လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုအရည်အသွေးသို့မဟုတ်စကားပြန်သတင်းအချက်အလက်သဘောဆောငျကောက်ချက်ချ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။
အဆိုပါနျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ၏ဖြန့်ချိ (DA) (NACC) နှင့်တစ်ဦးအပြောင်အတိုင်းအတာငှါ, striatum အလွဲသုံးစားမှုအစားအစာ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် postulated ခဲ့ပြီး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက (ပညာရှိ Rompre, 1989; Phillips က et al ။ , 1991; Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ (တစ်ဦး NACC အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးလာသို့မဟုတ် striatum အားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ဤလှုပ်ရှားမှုဟာလှုံ့ဆော်မှုဖို့မက်လုံးပေး salience attributes ကြောင်းအကြံပြုထားသည်Phillips က et al ။ , 1993; Schultz et al ။ , 1993; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ DA အဆိုပါ striatum နှင့် NACC အတွက်တိုးပွါးလာသောအခါထိုအချိန်ကကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေတွင်ဤအာရုံကြောအဆောက်အဦများ၏အခန်းကဏ္ဍသို့အပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိနိုငျပါသညျ။
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသဘာဝကျကျစံဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင်ကြောင်းသုတ်ရည်ထိအတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်ကြားတွင်ထူးခြားသည် (ထိုမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များအတွက်ဆုချီးမဟုတ်ပါOldenburger et al ။ , 1992; သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Alonso, 1997) ။ အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင် DA (သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း striatum နှင့် NACC ထံမှ dialysate ရှိတိုးမြှင့်နေသည်Meisel et al ။ , 1993; Mermelstein နှင့် Becker က, 1995; Pfaus et al ။ , 1995) ။ အမျိုးသမီးကြွက်အဘို့, သို့သော်, NACC DA ၌ဤတိုးမှသာအမျိုးသမီး (intromissions ၏အချိန်ကိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ် PACE နိုငျသညျ့အခွအေနအောက်မှာရှာတွေ့ထားပြီMermelstein နှင့် Becker က, 1995; Pfaus et al ။ , 1995) ။ intromissions ၏အရှိန်အဟုန် implantation မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဟော်မုန်း (ဆိုလိုသည်မှာယင်း progestational တုံ့ပြန်မှု) ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ အမျိုးသမီးကြွက် pacing သောအခါ intromissions ဆိတ်ကွယ်ရာ ~1-2 မိလှပတဲ့နေကြပြီး, သုက်ကိုယ်ဝန်မှုလတံ့သောအခွင့်အလမ်းသိသိသာသာတိုးမြှင့်သည် intromissions နှုန်းအထီးအဘို့အသုတ်ရည်ထိပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်း (အနည်းဆုံးအခါမျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါAdler et al ။ , 1970).
intromissions ၏အကောင်းဆုံးအရှိန်အဟုန်အတွက်အမျိုးသမီးကြွက်အကြားတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိပါတယ်Adler, 1978) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးသမီးကြွက် (ထိုတစ်ဦးချင်းစီကြွက်များတွင် progestational တုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်း "အင်္ဂါဇာတ်ကုဒ်" ရှိပါတယ်Adler et al ။ , 1970; McClintock နှင့် Anisko, 1982; McClintock et al ။ , 1982; McClintock, 1984; Adler နှင့် Toner, 1986) ။ အမျိုးသမီးကြွက်ထီးကြွက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်သည့်နောက်အတားအဆီးလည်းမရှိဆိုပါကဓာတ်ခွဲခန်းအခွအေနေမှာတော့ PACE အပြုအမူ (ဖြစ်ပေါ်McClintock, 1984; Erskine, 1989) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထို့အပွငျ, သုတ်ရည်ထိ pacing ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum နှင့် NACC ထံမှ dialysate အတွက် DA ပြင်းအားအတွက်တိုး PACE မနိုင်ကြောင်းအမျိုးသမီးကြွက်သို့မဟုတ်အထီးကြွက်မပါဘဲစမ်းသပ်ပြီးအပြုအမူလက်ခံတိရိစ္ဆာန်များ (များ၏ထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်သည်Mermelstein နှင့် Becker က, 1995) ။ အမျိုးသမီး pacing နှင့် nonpacing အမျိုးသမီး copulatory အတွေ့အကြုံတစ်နာရီအတွင်းမှာတောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုက်၏တူညီသောအရေအတွက်အားလက်ခံရယူပင်လျှင်ဤစကားမှန်သည်။ ဤရလဒ်သည်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုမြှင့်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ pacing စဉ်အတွင်း NACC နှင့် striatum အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးလာဘို့အရေးကြီးသောကဘာလဲ? က copulatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပမာဏ, copulatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိန်ကိုက်, ဒါမှမဟုတ် extracellular DA အတွက်တိုး induces သောအထီးကြွက်များ၏ copulatory အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်၏လုပ်ရပ်လား? ဒီစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အထွေထွေအတွင်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေအတွက် striatum နှင့် NACC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
ဘာသာရပ်များ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို Long-အီဗန်ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories, ဝီလ်မင်တန်, MA) ဒီစမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 180-200 gm ချိန်တွယ်။ သူတို့ stereotaxic ခွဲစိတ်သည်အထိမိန်းမတွေကသူတို့တစ်ဦးချင်းစီသျောခဲ့ပြီးသောနောက်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလှောင်အိမ်နှုန်းသုံးခုသျောခဲ့ကြသည်။ အထီးကြွက်ကဒီစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက် phytoestrogen-အခမဲ့ကြွက် Chow အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်အတူ 14 / 10 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည် (2014 Teklad ကို Global 14% ပရိုတိန်းကြွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစားအသောက်များတွင်; Harlan, Madison, WI) နှင့်ရေ။
ခွဲစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ အမျိုးသမီးကြွက်ရောက်ရှိပြီးနောက် methoxyflurane မေ့ဆေး ~2 ရက်သတ္တပတ်အောက်မှာတစ်ဦး dorsal ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် (OVX) ovariectomized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအင်္ဂါဇာတ် epithelium အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များလုံးဝ OVX ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် 8 ရက်ဆက်တိုက်ဆား lavage နေဖြင့်နေ့စဉ်လေ့လာခဲ့သည်။
Stereotaxic ခွဲစိတ်မှုကို methoxyflurane နှင့်ပေါင်းစပ်ဆိုဒီယမ် pentobarbital မေ့ဆေး (45 mg / kg, ip) အောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လမ်းညွှန် cannulas ကို ဦး ခေါင်းခွံမှတဆင့်နာတာရှည် implants နှင့် dorsolateral striatum နှင့် contralateral နျူကလိယ accumbens (ဘယ်ဘက် - လက်ျာကျပန်း) ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဦး ခေါင်းခွံကိုရတနာ၏ဝက်အူများဖြင့် ဦး ခေါင်းခွံပေါ်တွင်သွားဘက်ဆိုင်ရာ acrylic ဖြင့်လုံခြုံထားသည်။ Stereotaxic ကိုသြဒီနိတ် (bregma, skull flat) မှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ dorsolateral striatum, rostral 0.2 mm, lateral 3.2 mm, ventral 1 mm; နျူကလိယ accumbens, rostral 1.8 မီလီမီတာ, နှစ် ဦး နှစ်ဖက် 1.5 မီလီမီတာနှင့် ventral 1 မီလီမီတာအဘို့။
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း။ အဆိုးရွားဆုံးသောလိင်အင်္ဂါအမြှေးပါးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြသသော OVX သတ္တဝါများသည်အရေပြားကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ ၇၂ နာရီနှင့် ၅၀ μg estradiol benzoate (EB) ကို ၃ ရက်ဆက်တိုက်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ၊ စတုတ္ထနေ့၌အမူအကျင့်စမ်းသပ်။ စမ်းသပ်ခန်း (၆၁ × ၂၅ × ၄၆ စင်တီမီတာ) သည် Plexiglas ဖြစ်ပြီး၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနယ်ပယ် (အထီးရှိရာနေရာ) တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနယ်ပယ်မှအမျိုးသမီးများလွတ်မြောက်နိုင်သည့်ကွဲလွဲသောနံရံ (၂၀ × ၀.၂၅ × ၂၅ စင်တီမီတာ) ရှိသည်။ အထီးကနေ။ အမျိုးသမီးသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ခဲ့သည် အထီးတ ဦး တည်းဘက်မှာနေရန် passive ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ Pacing သည် Mount, intromissions နှင့် Ejaculations များအကြား return latency (အထီးကယောက်ျားနှင့်ထိတွေ့မှုမှမိန်းကလေးပြန်လာသည့်မိန်းကလေး၏အထီးအခြမ်းသို့စက္ကန့်အနည်းငယ်) ကွာခြားမှုအားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ သန္ဓေတည်ပြီးနောက်ပြန်လာသည့်အောင်းနေချိန် intromissions ပြီးနောက်ပြန်လာသောအောင်းနေချိန်ထက်နည်းလျှင်၊ အမျိုးသမီးများသည်အရှိန်မြှင့်နေကြသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုအပေါ်အဆက်အသွယ်များအကြားကြားကာလ 5% ခြားနားချက်ပြမပြုခဲ့ OVX အမျိုးသမီးများလေ့လာမှုမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည် (n =9ကြွက်၏ 59) ။
တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ် stereotaxic ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်, OVX ကြွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အပြုအမူ pacing ပြန်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ (ထိုနှစ်ခု PACE အစည်းအဝေးများအတွက်) intromissions ပြီးနောက်ပျမ်းမျှပြန်လာအောင်းနေချိန်တိရစ္ဆာန်၏ဦးစားပေး PACE ကြားကာလအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
OVX အမျိုးသမီးကြွက်ကျပန်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထား) အောက်ပါအုပ်စုများ၏တဦးတည်းမှတာဝန်ကျ: pacing (n = 8), နှစ်သက် PACE ကြားကာလ (PPI; n = 9), အင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံး (n= 8), nonpacing (n9စက္ကကြားကာလ (NP-30 စက္က nonpacing = 30), n = 8), သို့မဟုတ် 10 မိကြားကာလ (NP-10 မိ nonpacing; n = 8) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Dialysis မီ, အားလုံး OVX ကြွက် eb နှင့်အဓိကချို့ယွင်းနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ PACE အဖွဲ့ PACE အခန်း Dialysis စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ PPI အုပ်စုတစ်စုကိုဖယ်ရှားသည့်အတားအဆီးတွေနဲ့အတူတူအခန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်, နှင့်အထီးကြွက်တစ်ဦး intromission သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်အခန်းထဲသို့နေဖယ်ရှားနှင့်အမျိုးသမီး (87-120 စက္က; ယုတ် = 100.1 စက္ကန့်) ၏ဦးစားပေးကြားကာလမှာပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ် ယခင် PACE အခြေအနေများတွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။ အဆိုပါအင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံးအုပ်စုတစ်စုပေမယ့်လိင်အင်္ဂါ occluding တိပ်ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစအတူ PACE အခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါတိပ်ခွေအခြေခံနမူနာများ၏ကနဦးစုဆောင်းမှုမပြုမီရာဌာန၌ထား Dialysis တစ်လျှောက်လုံးအရပျ၌ကနျြရစျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ nonpacing အဖွဲ့ဒီလိုပါပဲအတားအဆီးမရှိဘဲစမ်းသပ်ခန်း၌နေရာချခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်အထီးသူအခနျး၌ရှိ၏အချိန်ကိုစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ nonpacing ကြားကာလအုပ်စုများလည်းအရပ်ဌာန၌အတားအဆီးမရှိဘဲစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပေမယ့်အထီးတစ်ဦး intromission သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် 30 စက္ကသို့မဟုတ် 10 မိတစ်ခုခုကိုပြန်လေ၏။ အပြုအမူအထီးအခနျးထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သောအခြိနျကာလ၏ 1 နာရီကာလအတွင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အပြုအမူစမ်းသပ်ယူဆချက်မှမျက်စိကန်းလေ့လာသူများကသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ PACE အခန်းတိရစ္ဆာန်များအဘို့, ပြန်လာအောင်းနေချိန် Dialysis နမူနာစုဆောင်းမှု၏တစ်ဦးချင်းစီ 15 မိကြားကာလအတွင်းမှာတောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုက်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုက်၏နံပါတ် Dialysis နမူနာစုဆောင်းခြင်းကြားကာလမိတစ်ခုချင်းစီ 15 ကာလအတွင်းဖြစ်သကဲ့သို့အားလုံးတိရစ္ဆာန်များအဘို့, အမျိုးသမီးအခနျး၏ဗဟိုကူးအကြိမ်အရေအတွက်က (crossing များကို), စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
Microdialysis စမ်းသပ်ခြင်း။ အားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်စေအသုံးပြုသော Robinson နဲ့ Whishaw (1988) သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေး (CMA / 11; CMA / Microdialysis AB, Chelmsford, MA) ။ အားလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် စသည်တို့အတွက် ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 37 မှာ (အသုံးမပြုခင်က C °Becker ကနှင့် Rudick, 1999) ။ အဆိုပါ accumbens များအတွက် striatum သို့မဟုတ် 18 ± 4% များအတွက် 12 ± 4% ၏ DA ပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေး accumbens များအတွက် striatum သို့မဟုတ် 6.25 မီလီမီတာ (4 မီလီမီတာ Dialysis အမြှေးပါး) အတွက် 8.25 မီလီမီတာ (2 မီလီမီတာ Dialysis အမြှေးပါး) ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးနမူနာများစုဆောင်းခြင်းမပြုမီ methoxyflurane မေ့ဆေး 12-18 နာရီအောက်ရှိ dorsolateral striatum နှင့် contralateral နျူကလိယ accumbens သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအာကာသယာဉ်ကနေတဆင့်စီးဆင်းနှုန်းက 1.5 μl / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်နမူနာ 15 မိကြားကာလမှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ DA, dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC), နှင့် homovanillic အက်ဆစ် (HVA) ၏ပြင်းအား (HPLC နှင့်လြှပျစစျထောက်လှမ်းသုံးပြီး dialysate ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်Becker ကနှင့် Rudick, 1999) ။ နှစ်ခုအခြေခံနမူနာ၏ပျမ်းမျှ DA, DOPAC နှင့် HVA (နာလန်ထူ၏ရာခိုင်နှုန်းအဘို့အတညျ့) ၏ Basal extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးတန်ဖိုးများ dialysate ၏ 15 μlအတွက် femtomol အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်။ microdialysis ၏နိဂုံးမှာအမျိုးသမီး 0.9% formalin အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဆိုဒီယမ် pentobarbital နှင့် 4% ဆား၏ intracardial perfusions တစ်ဦးသေစေလောက်ဆေးထိုးပေးထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ dorsolateral striatum သို့မဟုတ် NACC အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အနေအထားကို cresyl ခရမ်းရောင်-စွန်း 50 μmကဏ္ဍများအနေဖြင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏ site ကိုတိရစ္ဆာန်၏ကုသမှုတစ်ခုလေ့လာသူမျက်စိကန်းသောကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Dialysis အချက်အလက်များကို NACC အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူ Dialysis အဆိုပါ striatum အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရှစ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူလေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ဖယ်ထုတ်ထားပေမယ့်ဒီတူညီတဲ့တိရိစ္ဆာန်များမဟုတ်ကြနှင့်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဝေခဲ့ကြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NACC ထဲမှာ Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးအများစု (အဓိကဖြစ်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်n = 34), ဒါပေမဲ့အနည်းငယ် (အ core ကို-shell ကိုနယ်နိမိတ်ရှိကြ၏n shell ကိုအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာ = 4) သို့မဟုတ် (n = 4) ။ core ကို-shell ကိုဖြန့်ဖြူးအတွက်အပြောင်းအလဲအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး randomized ခဲ့ပါတယ်နှင့် Dialysis data တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားနှင့်အတူကွဲပြားကြဘူး။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ dialysate ဒေတာအတွက်ဗိုလ်လုပွဲနံပါတ်များကိန်းဂဏန်းများဖို့ဒဏ္ဍာရီထဲမှာညွှန်ပြနေကြသည်။ အပြုအမူအားလုံးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ ဒေတာကိုအုပျစုကွဲပြားမှုရှိကြ၏ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အထပ်ထပ်အစီအမံ ANOVA နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ post ကို hoc တစ်ဦးချင်းစီအချိန်အချက်များမှာနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ Bonferroni-Dunn ဆုံးမခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားကိုမှထိတွေ့မှုကာလအတွင်း extracellular DA အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အုပ်စုတစုအတွင်းနှိုင်းယှဉ်စုံတွဲနဲ့ပြုမိခဲ့ကြ t စမ်းသပ်မှုများ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ Macintosh ကွန်ပျူတာများအတွက် Statview 4.5 + အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
NACC ထံမှ dialysate အတွက် DA ယောက်ျားကြွက်ဟာ NP-10 မိအုပ်စုတစ်စု မှလွဲ. အားလုံးအုပ်စုများများအတွက်စမ်းသပ်ခန်း၌ပစ္စုပ္ပန်သောနာရီကာလအတွင်းအခြေခံထက်သိသိသာသာပိုပြီးတိုးလာ (အထီးပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူနာရီကာလအတွင်းယုတ် vs အခြေခံစဉ်အတွင်းဆိုလို; တွဲ tစမ်းသပ်မှု; p <0.05) ။ extracellular DA အတွက်တိုးသည်အခြားအုပ်စုများအဘို့အထက်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် PPI အုပ်စုများအတွက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည် (ပုံ။ 1အုပ်စုတစ်စု၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု,F (5,42) = 9.49; p <0.0001) ။ တွဲဖက်နှိုင်းယှဉ်မှုများတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့် PPI အုပ်စုများအတွက် extracellular DA တိုးပွားမှုသည်အခြားသောအဖွဲ့အားလုံးထက်သိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသည် (p <0.003) နှင့်အုပ်စုများအကြားမျှမကအခြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ အရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အုပ်စုများအတွက် extracellular DA အတွက်တိုးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေမတူကြဘူး
dialysate အတွက် DA ပါဝင်မှု (fmole / 15 မိ) လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens ထံမှရရှိခဲ့သည်။ အချိန်0များအတွက်ရရှိသောတန်ဖိုးအခနျးထဲသို့အထီးကြွက်များ၏နိဒါန်းမတိုင်မီချက်ချင်းရယူနှစ်ခု 15 မိအခြေခံနမူနာများ၏ဆိုလိုသည်။ တန်ဖိုးများကို SEM ±ယုတ်ဖော်ပြသည်။ ** ယောက်ျားပစ္စုပ္ပန်ကြီးအခြိနျကာလအတှငျး dialysate အတွက် DA အတွက်တိုး (အခြားအုပ်စုများထက်အရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အုပ်စုများအတွက်သိသိသာသာကြီးp <0.003) ။ အုပ်စုများအကြားအခြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။
ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် 1အဆိုပါ Basal extracellular DA အတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် NP-10 မိအုပ်စုက nonpacing, အင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံး, ဒါမှမဟုတ် NP-30 စက္ကအုပ်စုများထက် dialysate အတွက်ပိုမိုမြင့်မား Basal DA နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုစတင်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ NP-30 စက္ကအုပ်စုတစ်စု pacing, ထိုအင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံးထက်နိမ့် extracellular DA နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် PPI အုပ်စုများ။ Basal extracellular DA ပြင်းအားတိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း extracellular DA တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်ရှိမရှိမသိသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
striatum ထံမှ dialysate အတွက် DA အထီးပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူနာရီကာလအတွင်းယုတ် vs အခြေခံစဉ်အတွင်းဆိုလိုခြင်း (အထီးကြွက်ဟာ NP-10 မိနှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုများ မှလွဲ. အားလုံးအုပ်စုများများအတွက်စမ်းသပ်ခန်း၌ပစ္စုပ္ပန်သောနာရီကာလအတွင်းအခြေခံကနေသိသိသာသာတိုးတက်သဖြင့်, တွဲt စမ်းသပ်မှု; p <0.02) ။ extracellular DA အတွက်တိုးသည်အခြားအုပ်စုများထက်ပုံအောင့်အုပ်စုနှင့် PPI အုပ်စုအတွက်သိသိသာသာသာလွန်ခဲ့သည် (ပုံ။2အုပ်စုတစ်စု၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု,F (5,40) = 16.68; p <0.0001) ။ တွဲဖက်သောနှိုင်းယှဉ်မှုများအရအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့် PPI အုပ်စုများအတွက် extracellular DA တိုးလာခြင်းသည်အခြားသောအုပ်စုအားလုံးထက်သိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသည် (p <0.003) နှင့်တ ဦး တည်းအနေဖြင့်အခြားမှကွဲပြားခြားနားခဲ့ပါဘူး။ NP-10 min နှင့် NP-30 sec အုပ်စုများတွင်တွေ့ရသောအတ္ထုပ္ပတ္တိမဟုတ်သည့်အုပ်စုအတွက် extracellular DA တိုးပွားမှုမှာသိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသည်။p <0.0033) ။
dialysate အတွက် DA ပါဝင်မှု (fmole / 15 မိ) လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum ထံမှရရှိခဲ့သည်။ တန်ဖိုးများကို SEM ±ယုတ်ဖော်ပြသည်။ ** ယောက်ျားပစ္စုပ္ပန်ကြီးအခြိနျကာလအတှငျး dialysate အတွက် DA အတွက်တိုး (အခြားအုပ်စုများထက်အရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အုပ်စုများအတွက်သိသိသာသာကြီးp <0.003) ။ * ယောက်ျားများရောက်ရှိနေချိန်တွင် dialysate ၌ DA တိုးပွားခြင်းသည် NP-10 min နှင့် NP-30 sec အုပ်စုများထက် (nonpacing group) အတွက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည်။p <0.0033) ။
ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် 2အဆိုပါ Basal extracellular DA အတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် NP-30 စက္ကအဆိုပါ PACE ထက်နိမ့် extracellular DA နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုစတင်အုပ်စု, PPI နှင့် nonpacing အဖွဲ့များနှင့်လည်းရှိခဲ့သည်။ Basal extracellular DA ပြင်းအားတိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း extracellular DA တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်ရှိမရှိမသိသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
HVA နှင့် DOPAC ပမာဏကို NACC နှင့် striatum နှစ်ဦးစလုံးထံမှ dialysate တွေ့ရှိယောက်ျားကြွက်အခနျးထဲမှာအခါအချိန်ကာလအတွင်းတိုးတက်ပေမယ့်ဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုခုကိုအတွက်အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (Data ပြမဟုတ်) ရှိခဲ့သည်။
ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်3 A, ထိုအင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံးအုပ်စုတစ်စုကြားကာလမိပထမဦးဆုံး 15 စဉ်အတွင်းတောင်ပေါ်၏အကြီးဆုံးအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကိုနာရီကျော်, အ NP-10 မိအုပ်စုကအင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံးအုပ်စုတစ်စုနှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုတစ်စု (ပုံထက်နည်းပါးလာတောင်ပေါ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။3A()p <0.005) ။ ဤအရာသည် NP-10 min အုပ်စုအတွင်း၌ ၁၀ မိနစ်အကြိမ်ကြိမ်အခန်းထဲမှထပ်ခါတလဲလဲဖယ်ရှားခံရသည့်အထီး၏အပိုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (A,B) နှင့်လှုပ်ရှားမှု (C) ကိုအထီးအမျိုးသမီးကြွက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ခန်း၌ဖြစ်ဘူးသောအနာရီအတွင်းမှာ။Aအထီးပစ္စုပ္ပန်အခါတောင် 15 မိနမူနာစုဆောင်းခြင်းကာလတစျခုစီစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ B, Intromissions ပေါင်းယောက်ျားပစ္စုပ္ပန်ခဲ့အခါ 15 မိနမူနာစုဆောင်းခြင်းကာလတစျခုစီစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကလက်ခံရရှိသောသုက်။ အဆိုပါ nonpacing အုပ်စုသည် (ထို PACE သို့မဟုတ် PPI အုပ်စုများလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပို intromissions ပေါင်းသုက်ကိုလက်ခံရရှိp <0.01) ။ NP-30 sec အုပ်စုသည် PPI အုပ်စုထက်စာလျှင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုပိုမိုရရှိခဲ့သည် (p <0.01) ။ Cယင်းအထီးကြွက်အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်အတူအခန်းပစ္စုပ္ပန်သောနာရီကာလအတွင်းအထွေထွေလှုပ်ရှားမှု (လှောင်အိမ်ထဲမှာ midline ဖြတ်ကျော်အကြိမ်အရေအတွက်က) ။ ငွေကောက်ခံကာလယောက်ျားပစ္စုပ္ပန်အခါကြိမ်ရှိကြ၏။ အဆိုပါ nonpacing အုပ်စုတစ်စုကို (NP-10 မိခဲ့တယျထက်ပိုလှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံး, pacing, ဒါမှမဟုတ် PPI အုပ်စုများကိုဖန်ဆင်းp <0.003) ။ NP-30 sec အုပ်စုသည် NP-10 min (သို့) pacing groups များထက်လှောင်အိမ်ဖြတ်ကူးမှုကိုပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (p <0.0033) ။
ထိုအရှိန်အဟုန်အားဖြင့်လက်ခံရရှိ intromissions အရေအတွက်, nonpacing, NP-30 စက္ကနှင့် PPI အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အခါ, အုပ်စုတစု (ပုံ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။3A()F (3,30)= 4.986; p = 0.0063; ယောနိမျက်နှာဖုံးအုပ်စုတစ်စု intromissions မခံမယူခဲ့ပါဘူး, အ NP-10 မိအုပ်စုကို) အလွန်နည်းပါး intromissions လက်ခံရရှိနှင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာစာရင်းဇယား skewing ရှောင်ရှားရန်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ pairwise နှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်, nonpacing အုပ်စုသည် (ထို PACE သို့မဟုတ် PPI အုပ်စုများလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပို intromissions ပေါင်းသုက်ကိုလက်ခံရရှိp <0.01), နှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုသည် PPI အုပ်စုသည်ထက်ပိုမို intromissions ပေါင်းသုတ်ရည်လွှတ်လက်ခံရရှိခဲ့သည် (p <0.01) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးကြွက်ထီးကြွက်အခနျးထဲမှာ midline တလွှားမှာအနည်းဆုံး 25 ဖြတ်ပြအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တကွ, စမ်းသပ်ခန်း၌ပစ္စုပ္ပန်သောနာရီကာလအတွင်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ အဆိုပါ nonpacing အဖွဲ့ NP-10 မိ, အ PPI, ထိုအင်္ဂါဇာတ်မျက်နှာဖုံးဒါမှမဟုတ် pacing အုပ်စုများ (ထက်ပိုပြီးဖြတ်ပြp <0.0033) ။ NP-30 sec အုပ်စုသည် NP-10 min အုပ်စုနှင့် pacing group ထက် ပို၍ ကူးခြင်းများပြသထားသည် (p <0.0033) ။
အပြုအမူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးဖြင့်စေ့စပ်, လာမယ့်အထီး-အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိအဆက်အသွယ်ပြီးနောက်အောင်းနေချိန်အမျိုးသမီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်း coital ဆွ၏ယာယီပုံစံဆုံးဖြတ်ရန်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် 4အဆိုပါ PACE အုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးသိသိသာသာရှည် nonpacing သို့မဟုတ် PPI အုပ်စုများထက် (ကြ၏ကာလနှင့်အတူ, သုက်ပြီးနောက်အရှည်ဆုံးကြားကာလခဲ့p <0.008) ။ အဆိုပါအရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အုပ်စုများသည်အခြားအုပ်စုများထက် intromissions ပြီးနောက်ကာလပိုမိုရှည် (p <0.008) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် PPI အုပ်စုသည် NP-30 sec အုပ်စုထက်တောင်များနောက်တွင်ပိုမိုတိုတောင်းသောအချိန်ကာလရှိခဲ့သည် (p <0.008) ။
အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက်နောက်အထီး - အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်မတိုင်မီကြွက်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အောင်းနေ။ ဒေတာများကို NP-10 min အုပ်စုအတွက်မပြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တန်ဖိုးများကိုစမ်းသပ်သူမှထိန်းချုပ်ထားပြီးအမြဲတမ်း ၁၀ မိနစ်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ထိုအချက်အလက်များကိုပြန်လည်းနောက်ကျခြင်းအတွက်ဒေတာဆန်းစစ်ခြင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ Histograms ယုတ်ညွှန်ပြ; အမှားအရက်ဆိုင် SEM ±ညွှန်ပြ။P, PACE; PPI, ကြားကာလ pacing ပိုမိုနှစ်သက်; NP, nonpacing; NP-30 စက္က, စက္ကအုပ်စုတစ်စု-30 nonpacing; NP-10 မိ, 10 မိအုပ်စုကို nonpacing ။ * ထိုအရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အုပ်စုများကအခြားအုပ်စုများ (လုပ်ခဲ့တယ်ထက် intromissions ပြီးနောက်ပိုရှည်ကာလခဲ့p<0.008) ။ ** သန္ဓေတည်ပြီးနောက်အရှိန်မြှင့်အုပ်စုရှိတိရိစ္ဆာန်များသည် nonpacing သို့မဟုတ် PPI အုပ်စုများထက်ပိုကြာသည် (p <0.008) ။ † PPI အဖွဲ့သည် NP-30 sec အုပ်စုများထက်တောင်များပြီးနောက်တိုတောင်းသောကာလရှိခဲ့သည် (p <0.008) ။
ဒီစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကို copulatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိန်ကိုက်အဆိုပါ NACC ထံမှ dialysate အတွက် extracellular DA အတွက်တိုး၏ပြင်းအားများအတွက်အရေးပါကြောင်းဖော်ပြသည်။ nonpacing နှင့် NP-30 စက္ကတိရိစ္ဆာန်များ intromissions နှင့်သုက်၏အကြီးမားဆုံးသောအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိသော်လည်းအရှိန်အဟုန်နှင့် PPI အဖွဲ့များ NACC ထံမှ dialysate အတွက် DA အတွက်အကြီးမားဆုံးသောတိုးလာပါသည်။ အဆိုပါ striatum အဘို့, အမျိုးသမီး၏ဦးစားပေးကြားကာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း copulatory လှုံ့ဆော်မှုလည်း extracellular DA အတွက်အကြီးမားဆုံးသောတိုးသွေးဆောင်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတက်ကြွစွာကြားကာလ၏နှုန်းထိန်းချုပ်ဖြစ်စေမစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ nonpacing အုပ်စုမြင်ကြ striatal DA အတွက်တိုး, သို့သော်, ယောက်ျားဖယ်ရှားနှင့်အမျိုးသမီးများကပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းထက်အခြားကြားကာလမှာပြန်ရောက်ခဲ့သောအုပ်စုများထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PPI အုပ်စုတစ်စုကနေဒေတာတွေကိုအမျိုးသမီးကြွက်တက်ကြွစွာပါ (အထီးထွက်ခွာသို့မဟုတ်အထီးမှပြန်လာ, ဆိုလိုသည်မှာ) pacing နှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းညွှန်ပြ NACC အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးလာဘို့အမိန့်သို့မဟုတ် striatum အတွက် သာ. ကြီးဖြစ် ရှိသမျှသည်အခြားသောစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်၌ငါမြင်ရသောထက်။ အဆိုပါ PPI အုပ်စု extracellular DA အတွက်သိသိသာသာတိုး, တိုတောင်း (NP-30 စက္ကန့်) နှင့်အတူအုပ်စုများအတွက် extracellular DA အတွက်တိုးလာသို့မဟုတ်ရှည် (NP-10 မိ) အချင်းချင်း intromission ကြားကာလ၏မရှိခြင်းနဲ့မတူဘဲထဲမှာ, အချိန်ကိုက်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါသည် အဆိုပါ coital ဆွ၏ DA တိုးဘို့အရေးကြီးသည်။ ယောနိမျက်နှာဖုံးအုပ်စုတစ်စုကနေရလဒ်များ PACE ယန္တရားနှင့်အထီးကြွက်၏ရှေ့မှောက်တွင်သေးငယ်တဲ့ NACC အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးလာသို့မဟုတ် striatum သွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြပေမယ့် vaginocervical ဆွ၏မရှိခြင်း၌ဤတိုးလာသည့် PACE သို့မဟုတ် PPI သည်ထက်သိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်ပါတယ် အုပ်စုများ။
တဦးတည်းအ NACC ထံမှ dialysate အတွက် DA အတွက်တိုးနှင့် striatum intromissions နှင့်သုက်၏အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ကြောင်း postulate နိုင်ဘူး။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်တဦးတည်းအနေနဲ့ကနဦးပု nonpacing အတွက် DA တိုးနှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုများမျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ PACE နှင့် PPI အုပ်စုများ 20 မိနှုန်းထက်နည်းငါး intromissions ပေါင်းသုက်ကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းဤရွေ့ကားအုပ်စုနှစ်စု (15 မိနှုန်းပုံ ~15 intromissions ပေါင်းသုက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။3B) ။ အဆိုပါ NACC မှာအထီးကြွက်ဟာ nonpacing နှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုများအတွက်အခနျး၌ပါသောနာရီကာလအတွင်း extracellular DA အတွက်သေးငယ်တဲ့တိုးရှိ၏။ အဆိုပါ striatum အဘို့, DA တိုးအဆိုပါ NP-30 စက္ကနှင့် NP-10 မိအုပ်စုများထက် nonpacing အုပ်စုသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးကြားကာလစဉ်အတွင်းသို့သော် PACE နှင့် PPI အုပ်စုများအတွက် NACC နှင့် striatal DA အတွက်တိုးရှိသမျှသည်အခြားသောအုပ်စုများထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် DA တုံ့ပြန်မှု vaginocervical ဆွလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးမည်မျှ၏အတိုင်းအတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ nonpacing နှင့် NP-30 စက္ကအုပ်စုများလည်းအခြားအုပ်စုများထက်ပိုမိုတက်ကြွစွာ ရှိ. , သေးနိမ့် extracellular DA ခဲ့သောကြောင့်ယင်း striatum အတွက် DA အတွက်တိုးနှင့် NACC လည်း locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အပြုအမူ Pacing သာမကြာသေးမီက (ဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်Erskine, 1989) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံမှန်အားအထီးကြွက်အလိုတော်မှာအမျိုးသမီးကြွက်နှင့်အတူ copulate တတ်နိုင်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ပြီ။ ဤသည်အမျိုးသမီး-အစပျိုးအဆက်အသွယ်များနှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် reflex နှင့်ကာကွယ်ရေးအပြုအမူတွေကိုမြင့်မားမှုနှုန်း၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်များ။ seminatural အခြေအနေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးကြွက်တက်ကြွစွာ (အပြုအမူဖွယ်ရှိနေသည်ပြပျံတတ်သောမီးဖွငျ့အဖြစ်တက်ကြွစွာအထီးကနေဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့် copulatory အပြုအမူများ၏အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်McClintock, 1984) ။ မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုအတွက်အပြုအမူကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အရေးပါပုံကိုထင်ရှားစေသည်။ ကြွက်များသည်ကြွက်များအတွက်အလျင်အမြန်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသွားသောစီးနင်းခြင်းအတန်းများကို (intromissions များအကြား <၁ မိနစ်) သည်သန္ဓေတည်ခြင်းအနည်းဆုံးအရေအတွက်အားဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Adler, 1978) ။ အဆိုပါအမျိုးသမီးကြွက်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦး progestational တုံ့ပြန်မှုများ၏အမူအကျင့်ကို Activation လိုအပ်သည်။ intromissions အမျိုးသမီးများကပွေးညီကြသောအခါ, သုက်ကိုယ်ဝန်မှုလတံ့သောအခွင့်အလမ်း (သိသိသာသာတိုးမြှင့်နေသည်Adler, 1978) ။ ဤရွေ့ကားလိင် dimorphic မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံး၏မျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ရိုင်းများတွင်မိတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းစီအထီး-အမျိုးသမီးအားလုံးအတွက်ထက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အုပ်စုတစုအတွင်းပေါ်ပေါက်သတင်းပို့သည်။ လျင်မြန်သော intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်နှင့်တကွ, အထီး၏မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာသူ inseminate နိုင်အမျိုးသမီး၏နံပါတ်တတ်တယ်။ အမျိုးသမီး၏အရှိန်အဟုန်အပြုအမူကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွားစေပါသည်။
PACE အပြုအမူနှင့်အတူပိုမိုမွေးဖွားအပြင်, အမျိုးသမီးကြွက် (သူမ intromissions နှုန်း PACE နိုင်လျှင်သူမလိင်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည့်အတွက်နေရာတစ်နေရာတစ် preference ကိုဖွံ့ဖြိုးOldenburger et al ။ , 1992;သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Alonso, 1997) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမျိုးသမီးကြွက်သူတို့စံဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများ (အောက်မှလိင်အတွက်စေ့စပ်ထားတဲ့အတွက်နေရာတစ်နေရာတစ် preference ကိုမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးOldenburger et al ။ , 1992) ။ ထို့ကြောင့် intromissions ၏ pacing ဖြစ်နိုင်သောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျ striatum နှင့် NACC အတွက်တိုးချဲ့ DA နှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များအတွက်အားဖြည့်နေပါတယ်။
ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ shell ကိုပါဝင်သည်ကြောင့်နှစ်နိုင်ငံ NACC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်ဟာ NACC core ကိုထိန်းချုပ်တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ (ထက်အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ပိုများပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့Jenkins နှင့် Becker က, 2001) ။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ NACC ၏အထူး shell ကိုအဘို့ကို၎င်း NACC, ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ NACC အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး၏တည်နေရာကိုလေ့လာခဲ့သည် post ကို hoc။ အများစုမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် NACC ၏အဓိကအတွင်းနေရာချပေးခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရွေးချယ် shell ကိုထားခဲ့လျှင် NACC ၏အမာခံနှိုင်းယှဉ် shell ကိုအတွက်ရွေးချယ် microdialysis ၏ရလဒ်များ (DA အတွက်တိုး ပို. ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုပေမယ့်တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်Sokolowski et al ။ , 1998။ ) ။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်သို့သော်ဒီစမ်းသပ်မှုကနေအလုံအလောက်ဒေတာ, မရှိပါ။
ဒီစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်များ NACC ထံမှ dialysate အတွက် DA အတွက်တိုး coital ဆွသို့မဟုတ်သုတ်ရည်ထိ-related မော်တာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု passive တုံ့ပြန်မှုမပေးကြောင်းညွှန်ပြ။ အဲဒီအစားသူကလက်ခံရရှိ copulatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိန်ကိုက်အကြောင်းကိုအရည်အသွေးသတင်းအချက်အလက်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါ striatum အတွက်, သို့သော်, DA တစ်ခုတိုးကိုလည်း nonpacing အုပ်စုတွင်မြင်ကြသကဲ့သို့, အမျိုးသမီး၏ဦးစားပေးကြားကာလမှာလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျား coital ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် coital ဆွ၏အချိန်ကိုက်က NACC အတွက် DA တိုးအဘို့ဖြစ်၏အဖြစ် striatum အတွက် DA အတွက်တိုးလာသည်အရေးပါဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။
သူတို့ nonpaced လိင် (ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ pacing, ဒါပေမယ့်မရကြသောအခါအေးစက်သောအရပ်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းထားပါသည်Oldenburger et al ။ , 1992) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေကျနော်တို့ PACE လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြိုးကြောင်းအခြ။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား, ရလဒ်များ PPI အုပ်စု NACC DA အတွက်တိုးလာသည့် copulatory လှုံ့ဆော်မှုကြိုးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တိုးတက်မှုအတွက်စမ်းသပ်ချက်အမျိုးသမီး၏ PPI မှာအထီးမိတ်ဆက်တစ်ဦးဦးစားပေးရာအရပျ preference ကိုသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောအယူအဆစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
မေးခွန်းထို့နောက် PACE သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း NACC DA အတွက်တိုးလာသည့်ဆွသို့မဟုတ်ယင်း၏မက်လုံးပေး salience (လိုသော vs ဆိုလိုသည်မှာအကြိုက်) ၏ hedonic တန်ဖိုးကိုညွှန်ပြခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ထမြောက်တော်မူနိုင်ပါသည်။ NACC DA အတွက်တိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်လျှင်, nonpaced လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီး NACC DA တစ်ခုတိုးနှင့်အတူတော့သည်ပထမဦးဆုံးအနညျးငယျကနဦး intromissions နှင့်အတူပျော်မွေ့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဘူး။ intromissions လည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ (သို့မဟုတ်လည်းကွာခဏ) ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေသည်, အာရုံခံစားမှု hedonic တန်ဖိုးကိုဆုံးရှုံးမယ်လို့နှင့် DA လျော့လိမ့်မယ်။ နမူနာကဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာများထက်ပိုမိုတိုတောင်းသင့်လျော်သောကြားကာလမှာရရှိခဲ့ကြသည်လျှင်အမျိုးသမီးအခြား intromission ရှာယောက်ျားနှင့်အဆက်အသွယ် reinitiates မတိုင်မီ PACE လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း, DA တစ်ခု intromission နှင့်ပြိုလဲကာလအတွင်းမြင့်တက်သငျ့သညျ။ တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ပုံစံကိုကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (စဉ်အတွင်းရှုမြင်ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1995) ။ NACC DA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမက်လုံးပေး salience attributes လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, တ DA တိုးအနည်းငယ် intromissions ဦးစားပေးကြားကာလမှာလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးနောက်သည်အထိ PPI အုပ်စုတွင်ပေါ်ပေါက်မဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ NACC DA မက်လုံးပေး salience attributes လျှင်အမျိုးသမီးယောက်ျားနှင့်အဆက်အသွယ် reinitiates အဖြစ်ထို့အပွငျ, DA တိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ ကခငျြတသို့မဟုတ်ကြိုက်တယ်နေသည်ဖြစ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများအချိန်ကိုက်ကြောင့်တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦး intromission အားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့်အခါမှဆွေမျိုး NACC DA အတွက်တိုး၏အချိန်ကိုက်, DA ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. လညျးကစားအရာကိုအခန်းကဏ္ဍသင်ယူဖို့သုံးနိုငျ ။
NACC DA အတွက်တိုး၏ပြင်းအားတက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ pacing ခဲ့အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် PPI အုပ်စုသူများမပြုခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်ဒီအာရုံကြောစနစ်ကအထူးအားဖြည့်ရှာအပြုအမူတွေ၏ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်စတင်ဖြန်ဖြေမပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမှန်သည်။ ဤသည် DA စနစ်အမျိုးသမီး၏ဦးစားပေးကြားကာလမှာဖြစ်ပေါ်သည့်သုတ်ရည်ထိ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် activated ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုလည်း DA စနစ်သည်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသောအချက်ပြမှုများအတွက်အဓိကအားစိတ်မဝင်စားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ shell ကိုပါဝင်သည်ကြောင်း NACC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အမျိုးသမီးကြွက် (အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်တားစီးသောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားJenkins နှင့် Becker က, 2001), က NACC အတွက် DA မှသတင်းအချက်အလက် () ဒီဥပမာထဲမှာအထီးရှာအမျိုးသမီးသွေးဆောင်ဖို့အခ်ါတွင် neuron အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြောင်း။ ဖြစ်နိုင်
ကျနော်တို့ NACC အတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်တစ်ဦးအပြောင်အတိုင်းအတာငှါ, striatum လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုအရည်အသွေးသို့မဟုတ်စကားပြန်သတင်းအချက်အလက်သိရှိစေရန်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိ၏, ငါတို့ဒီစနစ်ထူးခြားစွပ်စွဲတန်ဖိုးဟာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ယင်း၏မက်လုံးပေး salience ၏ hedonic တန်ဖိုးကိုစေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းရန်။
Received နိုဝင်ဘာလ 2, 2000 ။
တည်းဖြတ်မူလက်ခံရရှိ ဇန်နဝါရီလ 4, 2001 ။
လက်ခံ ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2001 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း Grant က BNS9816673 ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဒဗလျူ Jenkins အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းကနေမိဿဟာယအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းအပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များများအတွက် Kent Berridge နှင့်တယ်ရီရော်ဘင်ဆင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူကို Jill ခ Becker က, စိတ်ပညာဌာန, Biopsychology ဧရိယာ, 525 အရှေ့တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, MI 48109-1109 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
ဒေါက်တာ Rudnick ၏လက်ရှိလိပ်စာ - အာရုံကြောသိပ္ပံဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်၊ အနောက်မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ အီဗန်စတန်၊ အီလီနွိုက်စ် ၆၀၂၀ ။
အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်မူပိုင်ခွင့်© 2001 Society က
(1978) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ယန္တယားများနှင့်၎င်းတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အသတ်ပေါ်မှာ။ in လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝဗေဒဆုံးအဖွတျ, ed ဟက် JB (Wiley, New York ), စစ 657-694.
ရှာရန် Google Scholar
(1986) ကြွက်များတွင်သုက်ပိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကလေးမွေးဖွားအပေါ် copulatory အပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 474:21-32.
(1970) ကြိုတင် implantation မှအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုအပေါ် copulatory အပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ 5:1003-1007.
Becker က JB,
(1999) တစ်ဦး microdialysis လေ့လာမှု: striatal dopamine အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်အီစထိုဂျင်သို့မဟုတ်ချို့ယွင်း၏လျင်မြန်သောသက်ရောက်မှုအီစထိုဂျင် Prime နေဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 64:53-57.
(1998) ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: 6-hyproxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက် hedonics, သင်ယူမှုနှင့်မက်လုံးပေး salience ။ ဦးနှောက် Res ဗြာ 28:309-369.
(1989) ပြန်လည်သုံးသပ်: အ estrous အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်တောင်းနိုင်အောင်အပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ 23:473-502.
Jenkins WJ, အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန် copulatory အပြုအမူအတွက် striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ Becker က JB (2001) အခန်းက္ပ။ စာနယ်ဇင်းများတွင်ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။
(1984) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်အခြေအနေတွင်အဖြစ်ပြည်တွင်းကြွက်များတွင် Group မှမိတ်လိုက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆန်းစစ်ဘို့အကျိုးဆက်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Adv လေ့လာမှုပြုမူနေ 14:1-50.
(1982) နော်ဝေကြွက်တို့တွင်အ Group မှမိတ်လိုက်။ သုတ်ရည်ထိ၏ပုံစံနှင့် neuroendocrine အကျိုးဆက်များအတွက်ဗြဲလိင်ကွဲပြားမှု။ Animation ပြုမူနေ 30:398-409.
(1982) နော်ဝေကြွက်တို့တွင်အ Group မှမိတ်လိုက်။ II ကို။ သုတ်ရည်ထိလူမှုဒိုင်းနမစ်: ယှဉ်ပြိုင်မှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုကို။ Animation ပြုမူနေ 30:410-425.
(1993) အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral striatal dopamine တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 55:151-157.
Becker က JB
(1995) နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် PACE copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum အတွက် extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြုမူနေ neuroscience 109:354-365.
(1992) အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အားဖြင့်သွေးဆောင်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Horm ပြုမူနေ 26:214-228.
(1997) အမျိုးသမီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် (ပွေးညီ) conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုမူနေ neuroscience 111:123-128.
(1995) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res 693:21-30.
(1991) Dopamine နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ in: Vivo ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ထိုးထွင်းသိမြင်။ in အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်က: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ, eds ကျား P, Scheel-Kruger J (Wiley, New York ), စစ 199-224.
(1993) တစ်ဦးလြှပျစစျလေ့လာမှု: အစားအစာများအတွက် conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ J ကို Physiol Pharmacol နိုင်သလား 71:387-393.
(1993) မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဗြာ 18:247-291.
(1988) လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက် microdialysis လေ့လာမှု: အ substantia nigra ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဖက်သတ် 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူအောက်ပါ striatum အတွက် extracellular dopamine ၏ပုံမှန်။ ဦးနှောက် Res 450:209-224.
(1993) မျောက် striatum နှင့် substantia nigra အတွက်ဆုလာဘ်-related လှုပ်ရှားမှု။ prog ဦးနှောက် Res 99:227-235.
(1998) နျူကလိယ၏တစ်ဦးက microdialysis လေ့လာမှုကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာကာလအတွင်း core နဲ့ shell ကို dopamine accumbens ။ neuroscience 86:1001-1009.
(1989) ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol 40:191-225.
(1995) နျူကလိယအတွင်းအတက်အကျကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 120:10-20.
နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens PNAS, 19 ဇန်နဝါရီလ 2010, 107(3):1217-1222
ကင်းအားဖြင့်နျူကလိယ Accumbens ရှဲလ်အတွင်း Dopamine ဂီယာ၏ဦးစားပေးစွမ်းရည်မြှင့် Phasic Dopamine ဖြန့်ချိပွဲများအတွက်တိုက်ရိုက်တိုးတက်မှ attribute Is အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 27 သြဂုတ်လ 2008, 28(35):8821-8831
ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်စနစ်က တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 29 ဒီဇင်ဘာလ 2006, 361(1476):2173-2186
မွေးကင်းစဆီသို့မိခင်တုန့်ပြန်ထိန်းညှိ Hypothalamic အာရုံကြောဆားကစ်။ အမူအကျင့်များနှင့်သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2006, 5(4):163-190
အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာ Hedonic ဟော့အစွန်းအကွက် အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2006, 12(6):500-511
သီခငျြးမော်တော်အစီအစဉ်၏ Rhythm အတွက်လူမှု-context-မှီခိုအပြောင်းအလဲများထဲသို့ဇီဝကမ္မ Insights Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 1 ဇွန်လ 2006, 95(6):3798-3809
အမြင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီး-ပြေးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြွက်တွေ၏ Neurobiology Integrated နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝဗေဒ, 1 ဇွန်လ 2005, 45(3):438-455
တစ်ဦးအာရုံကြောဆဲလ်အညီနှေးကွေး Genomics အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအပြည့်အဝစကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သည့်အစောပိုင်းအမြှေးပါးအီစထိုဂျင်ဆိုးကျိုးများ PNAS,9အောက်တိုဘာလ 2001, 98(21):12267-12271